Tuesday, 13 April, 2021 | ३१ चैत्र २0७७ , मङ्गलबार
नेपाल ट्रष्टको सम्पत्तिमा अपारदर्शी सम्झौता किन ?
काठमाडौँ । स्वास्थ्य र शिक्षाको विकासका लागि प्रयोग गरिने भनिएको पूर्वराजपरिवारको सम्पत्तिमा अनावश्यकरुपमा व्यापारिक प्रयोजनका लागि सम्झौता गरिएको भन्दै सांसदहरुले आपत्ति जनाएका छन् । पूर्वराजपरिवारको सम्पत्तिको व्यवस्थापन तथा समन्वयका लागि नेपाल ट्रष्ट स्थापना गरिएको भए पनि ट्रष्टले व्यापारिक
काठमाडौँ, माघ १६ गते । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विकास र समृद्धिको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा तथा जनताको सुखी जीवन हाम्रा चार अमर शहीदले देखाएको मार्गदर्शन भएको उल्लेख गर्नुभएको छ । शहीद दिवस २०७६ का अवसरमा लोकतान्त्रिक आन्दोलनका विभिन्न कालखण्डमा आफ्नो अमूल्य जीवन उत्सर्ग गर्ने अमर शहीदप्रति भावपूर्ण
काठमाडौं, माघ १६ गते । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी श्रीपञ्चमीका अवसरमा आज हनुमानढोका दरबारस्थित नासलचोक जानु भई परम्परानुसार वसन्त श्रवण गर्नुभयो । नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले उपलब्ध गराएकोे बिहान ९ः०५ बजेको शुभसाइतमा उहाँले वसन्त श्रवण गर्नुभएको हो । सो अवसरमा राष्ट्रपति भण्डारीले पण्डितबाट
एमसीसी सम्झौता छिटो अनुमोदन हुनुपर्छःप्रधामन्त्री ओली
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एमसिसी सम्झौता छिटो अनुमोदन हुनुपर्ने बताएका छन् । काठमाडौँको राष्ट्रिय सभागृहमा आजदेखि शुरु भएको पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो पूर्ण बैठकमा उद्घाटन सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सो कुरा बताएका हुन्
गायिका आस्था राउत ४ हजारमा घरौटीमा रिहा
काठमाडौं । प्रहरी हिरासतमा रहेकी गायिका आस्था राउत रिहा भएकी छन् । दुर्व्यवहार कसुरमा सोमबार पक्राउ परेकी राउत चार हजार धरौटीमा रिहा भएकी हुन् । काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहालले उनलाई रिहा गर्न अनुमति दिएका हुन । राउतले गत साता त्रिभुवन विमानस्थलमा चेकजाँचका क्रममा प्रहरीले आफूलाई
नवनिर्वाचित सभामुख सापकोटाले लिए सपथ
काठमाडौं । नवनिर्वाचित सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पद तथा गोपनीयताको सपथ लिएका छन् । राष्ट्रपति कार्यालय शितलनिवासमा आयोजित सपथ ग्रहण समारोहमा सभामुख सापकोटाले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष पद तथा गोपनीयताको सपथ लिएका हुन् । समारोहमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र
काठमाडौं । राष्ट्रपतिका राजनीतिक सल्लाहकार सुशील प्याकुरेलले पदबाट राजीनामा दिएका छन्। नेकपाका नेता अग्नि सापकोटा सभामुख हुने निश्चित भएसँगै उनले पदबाट राजीनमा दिएका हुन् । उनले आफू नैतिकतामा विश्वास गर्ने व्यक्ति भएकाले नैतिकता आधारमा पदबाट राजीनामा दिएको उल्लेख गरेका छन् । राष्ट्रपतिको प्रमुख
पहिलो मधेसी महिला एआईजीलाई दर्ज्यानी
काठमाडौं । प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) डा. आशा सिंहलाई दर्ज्यानी चिन्ह प्रदान गरेका छन् । मन्त्रिपरिषद्को माघ ६ गतेको निर्णय अनुसार प्राविधिक प्रहरी नायव महानिरीक्षकबाट प्राविधिक प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकमा पदोन्नती हुनुभएकी डा. सिंहलाई बुधबार प्रहरी
अग्नि सापकोटा सभामुखमा निर्विरोध
काठमाडौं । नेकपाका नेता अग्‍नि सापकोटा निर्विरोध सभामुख चयन भएका छन् । मंगलबार उम्मेदवारीका लागि निर्धारित समयमा अन्य दलबाट मनोनयन दर्ता नगरेपछि उनी निर्विरोध निर्वाचित हुने पक्‍का भएको छ। यसको औपचारिक घोषणा भने माघ १२ गते हुनेछ । १२ गते बस्‍ने प्रतिनिधिसभाको बैठकमा अरु कसैको उम्मेदवारी नपरेकोले
ग्यास हिटर बालेर सुत्दा निसास्सिएर आठ भारतीय नागरिकको मृत्यु
काठमाडौं । हेटौंडा । मकवानपुरको थाहा नगरपालिका–४ सिमभञ्ज्याङस्थित एभरेष्ट पानोरमा रिसोर्टमा बेहोस अवस्थामा भेटिएका ८ जना भारतीय नागरिकको मृत्यु भएको छ । मंगलबार बिहान अचेत अवस्थामा फेला परेका ४ पुरुष र ४ जना महिला भारतीय पर्यटकको उपचारका क्रममा काठमाडौंको धुम्बाराहीस्थित ह्याम्स अस्पतालमा उपचारकाक्रममा
उपसभामुख डा. शिवमायाको राजीनामा,सभामुख चयनको गाठो फुक्यो
काठमाडौं । उपसभामुख डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले राजीनामा दिनुहुने भएको छ । संसद सचिवालय स्रोतका अनुसार उहाँले आज प्रतिनिधि सभा बैठक सुरू हुनुभन्दा अगाडि नै राजीनामा दिन लाग्नुभएको हो । दिउँसो एक बजे संसद बैठक बोलाइएकाले त्यस अगाडि नै राजीनामा बुझाइने उपसभामुखका सञ्चार विज्ञ शेखर अधिकारीले बताएका
बाह्रबिसे बजारमा निषेधाज्ञा
चौतारा, माघ ५ गते । जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिन्धुपाल्चोकले आज बिहान ८ बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म बाह्रबिसे बजारमा निषेधाज्ञा जारी गरेको छ । बाह्रबिसे नगरपालिकाले सडक मिचेर दायाँबायाँ बनाइएको घरटहरा भत्काउँदा झडप भएपछि अप्रिय घटना हुन नदिन निषेधाज्ञा जारी गरिएको जनाइएको छ । बाह्रबिसे बजारको पूर्वतर्फ
विराटनगर । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सभामुख छनोट गर्न नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) लाई सकस भए आफ्नो पार्टी उम्मेदवारी दिन तयार रहेको बताएका छन् । बुधबार विराटनगर विमानस्थलमा पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै सभापति देउवाले संसदलाई बन्धक बनाउनु राम्रो होइन, सभामुख चाँडो चयन गरेर संसद सञ्चालन गर्न
दिलीपको परिवारलाई ५ लाख दिने प्रदेश सरकारको निर्णय
धनुषा । प्रदेश नं २ सरकारले नदीजन्य पदार्थ उत्खननविरुद्धको अभियानकर्ताका रुपमा चिनिएका मिथिला नगरपालिका–५ श्रीपुरका दिलीप महतोको परिवारलाई राहतस्वरुप रु पाँच लाख दिने निर्णय गरेको छ । नदीजन्य पदार्थ उत्खननविरुद्धको अभियानमा क्रियाशील हुँदा शुक्रबार दिलीपको हत्या भएको थियो । आन्तरिक मामिला तथा
रेल्वे विधेयक २०७६’ स्वीकृतः रेल्वे बोर्ड गठन हुने
काठमाडाैं । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा ‘रेल्वे विधेयक २०७६’ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको छ । बैठकमा उक्त विधेयक भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङले प्रस्तुत गरेका थिए । विधेयकमा रेल यात्रुको व्यवस्थापन कसरी गर्ने, सञ्चालनमा अवरोध गर्नेलाई कारवाही
प्रदेश नं ३ को नाम बाग्मती राजधानी हेटौंडा
हेटौडा । प्रदेश ३ को नाम बागमती र स्थायी राजधानी हेटौडा कायम भएको छ । आइतबारको प्रदेश सभा बैठकमा भएको मतदानमा दुई तिहाईभन्दा बढी सांसदले बागमतीको पक्षमा मतदान गरेका छन्। प्रदेशको नाम बागमती राख्ने प्रस्तावको पक्षमा एक सय आठ मत परेको छ। प्रदेश सभामा एक सय १० सदस्य रहेका छन्। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट
माघ ९ गते हुने राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि ४५ जनाको उम्मेदवारी
काठमाडौँ, २१ पुस - राष्ट्रियसभा सदस्यको १८ पदका लागि आगामी माघ ९ गते हुने निर्वाचनमा ४५ जनाको उम्मेदवारी परेको छ । उक्त निर्वाचनका लागि मुलुकका सातै प्रदेशमा आइतबार भएको उम्मेदवारी मनोनयपत्र दर्ता शान्तिपूर्ण रुपमा सम्पन्न भएको निर्वाचन आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद गौतमले जानकारी दिनुभयो
माघ ६ गतेभित्रै भुक्तानी दिलाउँछुः मन्त्री, अब धोका नहोस्ःकिसान
काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले आगामी माघ ६ गतेभित्रै मिल मालिकबाट उखु किसानको भुक्तानी गराईनेबारे लिखित सहमति गर्ने प्रतिबद्धता गरेका छन् । उनले लिखित रुपमै प्रतिवद्धता गर्न तयार रहेको भन्दै उखु किसानलाई आन्दोलन फिर्ता लिन आग्रह गरेका छन् । शुक्रबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले
काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्टसँग कानुनअनुसार नै सम्झौता गरेको बताएका छन्। उनले विगतका सरकारदेखि शुरु भएको कानूनी प्रक्रियाका आधारमा भाडा सम्झौता भएको दाबी गरेका छन् । बिहीबार राष्ट्रिय सभा बैठकमा उठेका विषयबारे जवाफ दिँदै उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले
समाजवादी पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता,संविधान संशोधनका लागि सडकमा
काठमाडौं । समाजवादी पार्टीले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ । बुधबार पार्टीको कार्यकारिणी समितिको बैठकबाट औपचारिक निर्णय गर्दै सरकारलाई दिएका समर्थन फिर्ता लिने र संविधान संशोधनका लागि सडक संघर्षमा जाने निर्णय गरेको हो । पार्टीले पत्रकार सम्मेलन गरि
लेखापाल र सुब्बा साबले २ दुइ हजार पनि छोडेनन् !
भैरहवा । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जिल्ला अदालत रुपन्देहीमा कार्यरत लेखपाल र नायब सुब्बालाई दुई हजार रुपैयाँ घुससहित पक्राउ गरेको छ। सेवाग्राहीसगँ मुद्दाको धरौटी रकम फिर्ता गराउनमा सहजीकरण गरिदिने भन्दै घुस लिँदै गर्दा अदालतका लेखपाल विनोद शर्मा र नासु बुद्धिप्रकाश न्यौपानेलाई रंगेहात
हाकिम साबलाई चिसो लाग्यो,हुम्लाका २० ओटा कार्यालय प्रमुख विहीन
दाने बोहरा/हुम्ला अत्याधिक चिसो बढेपछि हुम्लाका कार्यालय प्रमुखले जिल्ला छाडेका छन् । जिल्लाका ३२ ओटा सरकारी निकाय रहेकामा मध्य हिउँदसम्ममा २० ओटा प्रमुख विहीन भएका छ । हाकिम साबहरू चिसो छल्न गएपछि सेवाग्राही मर्कामा परेका छन् । जिल्लाको नियमनकारी निकाय जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा प्रमुख छैनन् । प्रमुख
अर्थविद् तथा पूर्वराजदुत भन्छनः एमसीसीलाई संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्छ, यो नेपालको हितमा छ
काठमाडौं । अर्थविद् तथा पूर्वराजदुतहरूले अमेरिकी सहयोग एमसीसी सहयोग संसदबाट अनुमोदन गरेर लिनुपर्ने बताएका छन् । उनीहरूले सरकारले संसदबाट अनुमोदन गरेर सहयोग लिदा कुनै विवाद नहुने दाबी समेत गरेका छन् । मंगलबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष
निजगढ–काठमाडौं द्रुतमार्ग : २८ हजार रूख काटियो, ११ हजार १०० रूख पनि सुरुङ निर्माण गर्दा काटिने
पुस ८, निजगढ (बारा) । नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा बन्दै गरेको निजगढ–काठमाडौं द्रुतमार्ग निर्माणका क्रममा २७ हजार ६९ रूख काटिएका छन् । करीब ७७ किलोमिटर निजगढ–काठमाडौं द्रुतमार्ग निर्माणका क्रममा सो क्षेत्रमा पर्ने करीब ३८ हजार ६६४ रूखमध्ये २७ हजार ६९ रूख काटिएको द्रुतमार्ग आयोजना कार्यान्वयन
७२ जना शंकास्पद चिनियाँ नागरिक पक्राउ
काठमाडौं । काठमाडौंको बाँसबारीमा महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौं, अपराध महाशाखा टोलीले ७२ जना चिनियाँ नागरिकहरुलाई नियन्त्रणमा लिएको छ । प्रहरीले बाँसबारीमा रहेका तीनओटा शंकास्पद घरहररूमा आकस्मिक रुपमा छापा मार्दा ७२ जना चिनियाँ नागरिक तथा उनीहरुले प्रयोग गरिरहेको ल्यापटप, मोवाइल तथा विद्युतीय उपकरण
श्रृष्टि अब कहिले कलेजको गेट छिर्ने छैनन्
अमरवाणी संवाददाता/काठमाडौं । श्रृष्टि पन्त,बानियाँलाई कलेजको कक्षा छोप्ने हतारो थियो । सोमबार बिहान ६.१५ बाट शुरु हुने पहिलो घन्टीमा पुग्न उनी आतुर थिइन । पशुपति बुहुमुखी क्याम्पसमा स्नातक तह चौथो वर्ष व्यवस्थापन संकायमा अध्ययनरत उनी अब कहिले कलेजको गेट छिर्ने छैनन् । बिहान ५.३० बजे काठमाडौं
३२ वर्षे उमेर हद लागु गर्न नेविसंघका युवाको माग
काठमाडौं । हाल क्रियाशील रहेका विद्यार्थी संगठनहरूमध्ये सबैभन्दा पुरानो विद्यार्थी संगठन हो नेपाल विद्यार्थी संघ। नेपाल विद्यार्थी संघको विधान सम्मत महाधिवेशन सुनिश्चितताको लागी भनेर रिले अनसन बसिरहेको छ । ने.बिं. संघको विधान २०२७ को सातौ संसोधन २०७५को धारा ५ को बुँदा ५ बमोजिम २० औं जिल्लाहरुमा
संसदको हिउँदे अधिवेशन सुरु
काठमाडौं । संसदको पाँचौ तथा हिउँदे अधिवेशन आजदेखि सुरु हुँदै छ । सभामुखको रिक्तताका कारण अधिवेशन उपसभामुख डा शिवमाया तुम्बाहाङ्फेको अध्यक्षतामा प्रारम्भ हुने संसद सचिवालयले जनाएको छ । पहिलो बैठकमा राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट प्राप्त पत्र सभाध्यक्षले पढेर सुनाइनेछ । यसबीचमा गरिएका मन्त्रिपरिषद् पुनःगठनलगायत
स्थायी कमिटी बैठक : भिम रावलले नेकपा र राजपाबीचको तालमेलको कवितामार्फत विरोध
काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) र केही दिनअघि सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएको राजपाकाबीच अर्को महिना हुने राष्ट्रिय सभाको उपनिर्वाचनका लागि बुधबार भएको तालमेलको अपारदर्शी शैलीलाई लिएर स्थायी कमिटी बैठकमा नेतृत्वको व्यापक आलोचना भएको छ। प्रभावशाली नेता भीम रावलले स्थायी कमिटी
त्रिविको ४५औं दीक्षान्त समारोह : १० हजार १ सय ८३ विद्यार्थी दीक्षित
काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको ४५औं दीक्षान्त समारोहबाट १० हजार १ सय ८३ जना विद्यार्थी दीक्षित भएका छन्। पुल्चोक क्याम्पसमा आयोजना भएको त्रिविको दीक्षान्त समारोहबाट सबैभन्दा बढी व्यवस्थापन संकायका ३ हजार ७ सय ३ जना विद्यार्थी दीक्षित भएका छन्। यसैगरी मानविकी संकायतर्फ २ हजार ९१, ईञ्जीनियरिङ्गमा
गर्भ तुहाएर छात्रा हत्या गरेको अभियोगमा प्रधानाध्यापक पक्राउ 150.2K